पाँच को years years बर्ष, एनिड ब्लिटनको क्लासिक बच्चाहरूको गाथा | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, युवा साहित्य
सेप्टेम्बर ११, अघि 75 वर्ष बालबालिका र युवा व्यक्तिको साहित्यको सबैभन्दा प्रसिद्ध सागासहरूको पहिलो साहसिक प्रकाशित भयो। यो त्यो थियो पाँच र टापुको खजाना। र यो पनि यस वर्ष पूरा भएको छ 120 को दशक यसको सिर्जनाकर्ता, प्रशंसनीय ब्रिटिश लेखकको जन्म एनिड ब्लिटन.
भन्दा बढिमा प्रकाशित Languages ​​90 भाषाहरू, लास संस्करण, पुनः जारी र अनुकूलन यस श्रृंखलाको पुस्तकहरूको टेलिभिजन असंख्य छन्। तिनीहरू भएको छैन विवादबाट मुक्त हालसालै तर कारणहरू यसको सफलताको अझै शक्तिशाली छन् र यही कारणले पनि लगभग एक लाख प्रतिहरू अझै पनि एक वर्षमा बिक्री गरिन्छ।
En पाँच र टापुको खजाना भाइहरू जुलियन, डिक, आना र तिनीहरूका चचेरा भाई जॉर्जिना उनीहरूको कुकुर टिमको साथ गर्मी खजाना को लागी खोजी र एक हजार र एक रहस्य पत्ता लगाउन मा खर्च गर्नुहोस् किरिन टापु। यस तरिकाले एक मित्रता विकास हुनेछ जुन प्रत्येक नयाँ रोमांचमा अझ बढ्नेछ।
Y तिनीहरू छन् पाँच? राम्रो जुलियन सबैभन्दा ठूलो र सब भन्दा अग्लो छ, स्मार्ट र जिम्मेवार. डिक हुनसक्छ यो सब भन्दा बढी हो शरारती र गाँठो, तर ऊ पनि धेरै दयालु छ। एनाकान्छो, को ख्याल राख्छ घरको काम के गर्ने। Y Georgina म बन्न चाहन्छु केटा जस्तै र कल गर्न मन पर्छ जर्ज। उनी पनि ब्रेभेट हुन्। Y टिमअवश्य पनि, यो जर्जको कुकुर हो, उनी जत्तिकै साहसी र सबैलाई माया गर्ने।
1 किन हामी तिनीहरूलाई मनपर्दछौं
2 सम्पूर्ण श्रृंखला
3 टेलिभिजन अनुकूलनहरू
4 पोर्तुगलमा श्रद्धांजलि प्रदर्शन
किन हामी तिनीहरूलाई मनपर्दछौं
र हामी तिनीहरूलाई अझै मनपराउँछौं किनकि:
हामीले पढ्न सिक्यौं तिनीहरुसँग। र नयाँ पुस्ताहरूले पनि त्यसो गर्न जारी राख्दछन्।
हामी पहिलो पटक खोजी गर्छौं। प्रकृतिमा, रहस्यमय ठाउँहरू, गुफाहरू र टाढाका ठाउँहरूमा, छोडेका घरहरू गोप्य खण्डहरूसहित जसले एक भन्दा बढी गोप्य लुकाउँदछ।
हामी पशुहरू कसरी माया र हेरचाह गर्ने पत्ता लगाउँछौं। को हुन चाहँदैनथे टिम जस्तो कुकुर, साहसिक कार्यको अथक साथी?
हामीले सबै मासु पाईहरू खायौं संसारको, नरम रोटी स्यान्डविच, स्यान्डविच, sarsaparillas वा नींबू पानी।
त्यहाँ एल्डरहरू थिएनन् नियम, कर्तव्य वा दायित्व संग क्यान दिने। तिनीहरू केवल ती धनी र प्रचुर मात्रामा स्नैक्स वा डिनर तयार गर्न देखा पर्दछन्। ती पाँचै जनाले उनीहरूको पछाडि भएको बिना नै उनीहरूले गर्न सक्ने कुरा गर्न सक्थे। र हामी तिनीहरू जस्तै स्वतन्त्र महसुस। तर उनीहरूले हामीलाई आफैं जिम्मेवार हुन र हाम्रा कार्यहरूले भोग्नु पर्ने नतिजा पनि सिक्न सिकाए।
को तर्क स्वयं निर्णायक थियो, तर तिनीहरूसँग सधै केही थियो नैतिक (वा नैतिक, वर्तमान प्रसंगमा) र सस्पेंसलाई सँधै कायम राख्छ। हो, खराब मान्छे जहिले हराउँदछ र राम्रो केटा सधैं जित्थे। मानको साथ हाइलाइट गर्न मित्रता, वफादारी, प्रयास र सहयोग केहि सम्भव थियो।
पाँच र द्वीप कोष (१ 1942 XNUMX२)
पाँच जनाको अर्को साहसिक (१ 1943 XNUMX)
पाँच छुटकारा (१ 1944 XNUMX)
द स्मगलर हिलमा पाँच (१ 1945 XNUMX)
कारभानमा पाँच (१ 1946 XNUMX)
किरिन टापुमा फेरि पाँच (१ 1947 XNUMX XNUMX)
पाँच गो शिविर (१ 1948 XNUMX)
पाँच समस्यामा छन् (१ 1949 XNUMX))
साहसिक अनुहारमा पाँच (१ 1950 XNUMX०)
पाँचको सप्ताहन्त (१ 1951 XNUMX१)
पाँचको ठूलो समय छ (१ 1952 XNUMX२)
पाँच जना समुद्री किनार (१ 1953 XNUMX)
रहस्यमय खजाने भूमिमा पाँच (१ 1954 XNUMX)
पाँच रमाइलो (१ 1955 XNUMX)
गोप्य मार्ग पछाडि पाँच (१ 1956 XNUMX)
बिलीकक हिलमा पाँच (१ 1957 XNUMX)
जोखिममा पाँच (१ 1958 XNUMX)
Finniston फार्म मा पाँच (१ 1960 XNUMX०)
शैतानको चट्टानहरूमा पाँच (१ 1961 XNUMX१)
पाँचले पहेलिको समाधान गर्नुपर्नेछ (१ 1962 XNUMX२)
पाँच जना सँगै फेरि (१ 1963 XNUMX)
सर्वाधिक चर्चित (र हामी सबैले देख्यौं) त्यो थियो ब्रिटिश श्रृंखला १ 1978 XNUMX se मौसममा २ ep एपिसोडसहित, आवाजको साथ एनरिक र अना हेडर गीत को रूपान्तरण मा। पछि अर्को थियो 1996, युके, क्यानडा र जर्मनीको सह-उत्पादन। २ सत्रहरूमा २ ep एपिसोड पनि।
पोर्तुगलमा श्रद्धांजलि प्रदर्शन
बाट जुलाई २ to देखि अक्टुबर। सम्म छिमेकी देश मा देखाइरहेको छ पोर्तुगाल को राष्ट्रीय पुस्तकालयमा लिस्बोयस कार्यक्रमको बारेमा ठीकै प्रदर्शन। शीर्षक, एनिड ब्लाइटन (१ 1897 1968-१-75 XNUMX): पाँच को years years बर्ष, सामान्य रूपमा यस लेखकको जीवन र कार्यको समीक्षा गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » युवा साहित्य » Of 75 बर्षको उमेर, एनिड ब्लाइटनको क्लासिक बच्चाहरूको गाथा
"43२ १", नयाँ पौलस्टर अस्टरबाट